WICShopper Download | JPMA, Inc
WICShopper WIC ရိုးရှင်းစွာ။
WICShopper သည် WIC ကိုသင်သုံးရန်လွယ်ကူစေမည့်ကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ အေဂျင်စီအားလုံးကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်တူညီသောစွမ်းရည်မျိုးမရှိကြပါ app ကိုစတိုးဆိုင်များတွင်ဖော်ပြချက်ဖတ်ပါရန်သေချာစေပါ!
သင့်ရဲ့ app store ကိုအတွက် WICShopper ရှာရန်သို့မဟုတ်ညာဘက်ပုံတစ်ပုံကိုထိပုတ်ပါ။
သင့်ရဲ့ WIC အေဂျင်စီကို Select လုပ်ပါ
ကျေးဇူးပြု! အက်ပလီကေးရှင်းကိုမထည့်သွင်းမီသင်၏အေဂျင်စီအားပံ့ပိုးမှုသေချာစေရန်အက်ပလီကေးရှင်းရှိဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ပါ။ အကယ်၍သာ မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ပို့နိုင်သည် WICShopper@jpma.com လျှင်အခါသင့်ရဲ့အေဂျင်စီထောက်ခံပါလိမ့်မည်ထွက်ရှာရန်။
အားလုံးမဟုတ်အေဂျင်စီများကတ်များမှတ်ပုံတင်ရန်နိုင်သည်ကို ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ!
ယင်း App ကိုရယူပါ
WICShopper သင့်ရဲ့ app store ကိုကနေ Download လုပ်ပါ
WICShopper သည်အောက်ပါပြည်နယ်များရှိ WIC အစီအစဉ်များကိုထောက်ပံ့သည်။ မက်ဆာချူးဆက်၊ ဖလော်ရီဒါ၊ အိုင်အိုဝါ၊ ကင်တပ်ကီ၊ ဒဗလျူဗာဂျီးနီးယား၊
သင့်ရဲ့ WIC ကတ်မှတ်ပုံတင်မည်
သင်၏ WIC EBT ကဒ်၏နံပါတ် ၁၆ လုံးပါသောနံပါတ်ကို အသုံးပြု၍ မှတ်ပုံတင်ပါ။ TX, NM, WY သို့မဟုတ် OH များတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုမဖြစ်နိုင်ပါ။
သင်သည်သင်၏, သင့်ကဒ်မှတ်ပုံတင်ပြီးတာနဲ့ ယခု အကျိုးကျေးဇူးများသည်အက်ပ်ကိုအလိုအလျောက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိမ့်မည်။ တောင်းပန်ပါတယ် TX, WY နှင့် NM, ဤအရာသည်သင်၏ပြည်နယ်များတွင်မဖြစ်နိုင်ပါ။
WIC ၏အရည်အချင်းပြည့်မှီမှုကိုစစ်ဆေးရန်ကုန်ပစ္စည်းများကိုသင် ၀ ယ်သည့်အခါစစ်ဆေးပါ။ ပြည်နယ်အားလုံးတွင် WIC အရည်အချင်းပြည့်မီမှုရှိပါကလျှောက်လွှာကသင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။ သင်၏အကျိုးခံစားခွင့်များကို download လုပ်ပါက၎င်းသည်ကျန်ရှိသောအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်အတူဤပစ္စည်းသည်သင့်အတွက်ရထိုက်ခွင့်ရှိမရှိကိုအက်ပ်ကသင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။
ဝမ်းနည်းပါတယ်, ဤအကြောင်းအရာအားသင်တို့အဘို့ WIC အရည်အချင်းပြည့်မီဘူး။
Oregon WIC အစီအစဉ်
Tennessee ပြည်နယ် WIC
အကြောင်းအရာပေးသူ, ကနျြးမာရေးတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ, non-profit အဖွဲ့အစည်း
Pennsylvania ပြည်နယ် WIC
နီဗားဒါး ITC WIC
အကြောင်းအရာပေးသူ, non-profit အဖွဲ့အစည်း
ကိုလံဘီယာ WIC ၏ခရိုင်
အရီဇိုးနား WIC ၏အင်တာမီလန်လူမျိုးစုကောင်စီ
Kansas ပြည်နယ် WIC
အိုင်အိုဝါ WIC - WICShopper
JPMA သည် WIC အစီအစဉ်တွင် ၁၂ နှစ်ကျော်ပါဝင်ခဲ့သည်။ မှ WIC ဆေးခန်းသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းပစ္စည်းများတွင်ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရဆိုင်ရာပညာရေး WIC အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သူအားလုံး၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုတိုးတက်စေသောဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုစူပါမားကတ်စစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားသည်။